Margarekha » के जाडोमा तपाईंकाे औंला सुन्निन्छ ? यस्तो छ बच्ने उपाय
: छाला रोग के जाडो मौसममा तपाईंको पनि हातखुट्टाका औंला रातो हुने, सुन्निने, चिलाउने, पोल्ने वा घाउ भएर फुट्ने गर्छ ? जाडो याममा यो समस्याले कतिपय मानिसलाई सताउने गर्छ ।
छाला रोग विशेषज्ञ डा. लामा सुझाव दिन्छिन्, ‘चिसोले मात्रै नभएर शरीरमा उत्पन्न हुने विभिन्न खालका रोगले पनि चिलब्लेन हुन सक्छ । त्यसैले घरेलु उपायहरुले काम गरेनन् भने छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाहमा उपचार गर्नु पर्छ।’ साभार राताेपाटीबाट